ဒသေခံ ပွညျသူမြား ကွောကျလနျ့နကွေရတဲ့ မကောငျးသညျ့ အတိတျနိမိတျဟု ဒသေခံမြားက ယုံကွညျပွီး စိုးရိမျနကွေ - MM Live News
”မွငျမကောငျးလောကျအောငျကို ရောကျရှိနတောပါ ….ဒီကနကေ့ောကျတာ တဈယောကျကို ၄ တငျးလောကျရတယျ …..ဒီခရုတှကေ ရှားပါးခရုတှပေါ ….ဒီလောကျ တဈခါမှ မတှဖေူ့းပါဘူး ….ဒါဟာ မကောငျးတဲ့ အတိတျ နမိတျလိုထငျပါတယျ ….
ရကွေီးတာ ငလငျြလှုပျတာ မုနျတိုငျး ဖွဈတာတို့ ကွုံရလာနိုငျပွီး အဲလိုဘေး ဆိုးကပျဆိုး တှဖွေဈမှာကွောကျတယျ ….ဟိုအရငျ နှဈသုံးဆယျလောကျက တဈခါကဖြူးတယျလို့ ရှလေူ့ကွီးတှကေ ပွောတယျ …..အဲ့တုနျးက ရဘေေး အန်တရာယျ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈခဲ့ဖူးပွီး အစာရစော ရှားပါးခဲ့တယျ …..
အခုလညျး အဲ့လို ဖွဈမှာ စိုးရိမျတာပါ”ဟု သဇငျကြေးရှာ ဒသေခံ ကိုကိုနိုငျက ပွောသညျ။အဆိုပါ ခရုမြားမှာ သွဂုတျ ပထမ အပါတျက တဈကွိမျ အနညျးအငယျ ရောကျရှိနပွေီး အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ တဈဦးလငျြ ၂ တငျးခနျ့အထိ ကောကျယူ ရရှိနပွေီး …..
ယငျးခရုမြား ရောကျရှိနသေညျ့အတှကျ ငလငျြဘေး၊ ရဘေေး၊မုနျတိုငျးဘေးစသညျ့ ဆိုးဝါး သဘာဝဘေးအန်တရာယျတဈခုခုကွုံခဲ့ မညျ့အတိတျနမိတျပေးခွငျးဟုယူဆကွ ပွီး စိုးရိမျနကွေပွီး အခြို့ဒသေခံမြားမှ ခကျြစားနကွေကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
”အဲ့ခရုတှကေ ရအေောကျမှာ နတေဲ့ သတ်တဝါပါ အခုလို ပျေါထှကျလာတော့ တဈခါမှ မတှဖေူ့းပါဘူး အခုက အောကျက မွေ ရတေောငျမတှရေ့ပါဘူး ခရုပဲတှရေ့တယျ အခြို့ကလညျး ခကျြစားဖိုး လာကောကျကွတာ တှရေ့ပါတယျ …..
အခွားထူးခွားတာတော့ မတှရေ့ပါဘူး ….စားတော့လညျး ဘာအန်တရာယျမှ မဖွဈကွပါဘူး …..သဘာဝဘေး အန်တရာယျ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကရြောကျမယျ့ အခွအေနကေို ပွနတောလို့ ယုံကွညျနကွေပါတယျ”ဟု သဇငျကြေးရှာမှ ဒသေခံ ဒျေါသေးသေးက ပွောသညျ။
သတငျးတာဝနျခံ – ကြျောခတျေလငျး #AlinnMyay(အလငျးမွေ)
ဒေသခံ ပြည်သူများ ကြောက်လန့်နေကြရတဲ့ အတိတ်နမိတ်
မာလိန်ခရုများ အလွန်းအမင်း ကျရောက်နေသဖြင့် မကောင်းသည့် အတိတ်နိမိတ်ဟု ဒေသခံများက ယုံကြည်ပြီး စိုးရိမ်နေကြ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ငွေဆောင်ကမ်း ခြေ သဇင်ကျေးရွာအုပ်စုကမ်း စပ် တစ်လျောက်တွင် မာလိန်ခရုများ အများအပြားထပ်မံကျရောက်နေသဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများမှ မကောင်းသည့် အတိတ် နိမိတ်ဟုယူဆထိပ်လန့် နေကြကြောင်းဒေသခံများမှသိရသည်။
”မြင်မကောင်းလောက်အောင်ကို ရောက်ရှိနေတာပါ ….ဒီကနေ့ကောက်တာ တစ်ယောက်ကို ၄ တင်းလောက်ရတယ် …..ဒီခရုတွေက ရှားပါးခရုတွေပါ ….ဒီလောက် တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး ….ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ အတိတ် နမိတ်လိုထင်ပါတယ် ….
ရေကြီးတာ ငလျင်လှုပ်တာ မုန်တိုင်း ဖြစ်တာတို့ ကြုံရလာနိုင်ပြီး အဲလိုဘေး ဆိုးကပ်ဆိုး တွေဖြစ်မှာကြောက်တယ် ….ဟိုအရင် နှစ်သုံးဆယ်လောက်က တစ်ခါကျဖူးတယ်လို့ ရှေ့လူကြီးတွေက ပြောတယ် …..အဲ့တုန်းက ရေဘေး အန္တရာယ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အစာရေစာ ရှားပါးခဲ့တယ် …..
အခုလည်း အဲ့လို ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာပါ”ဟု သဇင်ကျေးရွာ ဒေသခံ ကိုကိုနိုင်က ပြောသည်။အဆိုပါ ခရုများမှာ သြဂုတ် ပထမ အပါတ်က တစ်ကြိမ် အနည်းအငယ် ရောက်ရှိနေပြီး အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် တစ်ဦးလျင် ၂ တင်းခန့်အထိ ကောက်ယူ ရရှိနေပြီး …..
ယင်းခရုများ ရောက်ရှိနေသည့်အတွက် ငလျင်ဘေး၊ ရေဘေး၊မုန်တိုင်းဘေးစသည့် ဆိုးဝါး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြုံခဲ့ မည့်အတိတ်နမိတ်ပေးခြင်းဟုယူဆကြ ပြီး စိုးရိမ်နေကြပြီး အချို့ဒေသခံများမှ ချက်စားနေကြကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
”အဲ့ခရုတွေက ရေအောက်မှာ နေတဲ့ သတ္တဝါပါ အခုလို ပေါ်ထွက်လာတော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး အခုက အောက်က မြေ ရေတောင်မတွေ့ရပါဘူး ခရုပဲတွေ့ရတယ် အချို့ကလည်း ချက်စားဖိုး လာကောက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ် …..
အခြားထူးခြားတာတော့ မတွေ့ရပါဘူး ….စားတော့လည်း ဘာအန္တရာယ်မှ မဖြစ်ကြပါဘူး …..သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျရောက်မယ့် အခြေအနေကို ပြနေတာလို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်”ဟု သဇင်ကျေးရွာမှ ဒေသခံ ဒေါ်သေးသေးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ခရုပုံသဏ္ဍန်မှာ အချွန်၊ အလိမ် အရစ်များဖြစ်ပြီး အဝါ အနက်စပ်အရော င်ဖြစ်ပြီး လက်တလော ကောက်ယူချက်စား နေကြသော်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်တာ မတွေ့ရကြောင်း သိရသည်။
သတင်းတာဝန်ခံ – ကျော်ခေတ်လင်း #AlinnMyay(အလင်းမြေ)
March 25, 2019 MM Live News
နှလုံးရောဂါသည်သမီးလေးကို The Voice သတင်းစာမှာ အလှုခံပေးတဲ့ပိုစ်ပါလာလို့ ဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်လို့ဆိုပြီး ဆေးရုံမှခွဲစိတ်မပေးတော့ပါ
တောင်ကြီးမြို့ လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့သူများ၏ နာရေးမှ လူထောင်ချီတဲ့မြင်ကွင်း…